Iingcebiso: UMartin Vrijland
Funda ukuba wenze ntoni kwaye wenze ntoni kwi-coronavirus lockdown ezayo
Kufakwe kuyo INCWADANA YOKUFUNDA, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	20 Matshi 2020	• 19 Comments
Usodolophu wase-Amsterdam u-Femke Halsema uxele izolo ukuba ukuvalwa ngokupheleleyo kwe-Amsterdam akuyi kumangalisa. Nge-18 kaMatshi, uDe Telegraaf uxele ukuba amapolisa sele elungiselela ukuvalwa ngokupheleleyo. Ingxelo yeTelegraaf izolo ebusuku ukuba ubhubhane umkhuhlane ubuyile kubonakala ngathi ingxaki ngoku […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Matshi 2020	• 18 Comments
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendikhukuliswe yimibuzo malunga nokuqhambuka kwe-coronavirus. Yintoni ekufuneka ndiyenzile? Ndijongene njani nawo onke amanyathelo? Ngawaphi amalungiselelo endiwenzayo ukuze yonke into ivele? Ndineendaba ezimnandi. Iindaba ezimnandi zezokuba kuyacaca ukuba abantu abaninzi ngakumbi bayaqonda ukuba bayadlalwa […]
Utyelelo lulonke: 2.454.751
SandinG op Ukuthoba okukhulu kwexabiso lemali ngexesha lengxakeko ye-corona kukhokelela kwisiphumo se-hyperinflation: ngaba i-bitcoin isisombululo?
UMartin Vrijland op Amandla otshintsho aqala ngokuphalaza uloyiko, inkqubo kunye nokukhohlisa okungendawo kwaye iguqukele enguqukweni lokwenyani
UMartin Vrijland op Isibophelelo esichasene neMicimbi kaRhulumente u-Jordie Zwarts utshona kwiitoni, kodwa akaphumeleli nto
iifom op Ngaba ubunzima bukaTrump besiya e-China ukuqala kokuwa kweedola kunye nokuwa kwezoqoqosho?
Cubungula op I-iPhone ifihla i-covid-19 yohlaziyo kuhlaziyo lwe-I-OS 13.5